Maxaa diirada lagu saaray kulankii Gudoomiye Mursal iyo…
Magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya waxaa kulan ku yeshay hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran iyo guddoonka golaha baarlamanka Soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka.
Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh iyo guddoomiye ku xigeenka 1aad ee golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey ayaa kulan gaar ah la yeeshay Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran oo ay matalayeen guddoomiyaha madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Kulanka oo qaatay saacado badan ayaa lagu hadlay waxyaabo ay ugu muhiimsaneed doorashada Soomaaliya,inkastoo dhawaan gudiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ay soo bandhigeen labo nooc oo doorasha ah ayna dalbadeen waqti dheeraad ah taasi oo Xisbiyada mucaaradka ah ay ka hor yimaadeen.
Ujeedka kulanka ayaa ahaa in xaaladda dalka leyska wareysto gaar ahaan in guddoonka golaha shacabka uu warbixin la wadaago Madasha Xisbiyada Qaran oo talooyin dhowr mar u jeedisay hoggaanka dalka,ayaa lagu yiri war ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran.
Waxaa intaasi la raaciyay, waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay waxaa kamid ahaa baahida loo qabo inay waqtigooda ku dhacaan doorashooyinka, ayna noqdaan doorashooyin laga wada tashaday loo dhan yahay, keeni kara nabad iyo horumar loogana gudbi karo xaaladda adag ee dalku uu ku jiro, isla markaana ay jirto mabaadii guud iyo dammaanad lagu xaqiijinayo arrintaas.
Waxyaabaha kale ee dhinacayadu isla gaareen sida lagu sheegay qoraalka ay soo saareen Madasha Xisbiyadu waxaa ka mid ah in wada hadallada la sii wado si’ is faham buuxa looga gaaro arrimaha doorashooyinka, sidaasoo kale waxaa laga hadlay dhinacyada muhiimka u ah doorashooyinka in dadaal xooggan le geliyo sidii loogu qancin lahaa oo loogu waajihi lahaa doorashooyinka aragti mideysan oo dhalin karta kalsooni, sharciyad iyo taageerada shacabka.
Dhinaca guddoonka Baarlamaanka ma jiro wax war ah oo la xiriira kulankaan oo ka soo baxay waxaase kulankaan uu ka mid noqonayaa kulamo dhowr ah oo mudooyinkii dambe ay yeelanayeen guddoonka golaha shacabka iyo mas’uliyiinta Madasha ay ku mideysanyihiin qaar ka mid ah Xisbiyada mucaaradka ah .